Fahasamihafana eo amin'i E. Coli sy Pseudomonas Aeruginosa | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'i E. Coli sy Pseudomonas Aeruginosa | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / bakteriolojia / fahasamihafana eo amin'i E. Coli sy Pseudomonas Aeruginosa
Fahasamihafana eo amin'i E. Coli sy Pseudomonas Aeruginosa
1 Aogositra 2019 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny E. coli sy Pseudomonas aeruginosa dia ny E. coli dia karazan-bakteria anaerobic facultative izay an'ny fianakaviana Enterobacteriaceae sy ny karazana Escherichia, raha P. aeruginosa dia karazana bakteria aerobika izay an'ny fianakaviana Pseudomonadadaceae sy genus Pseudomonas.
Samy E. coli sy Pseudomonas aeruginosa dia bakteria miiba ratsy , miendrika tsorakazo ary motile. Ankoatr'izay, bakteria voahidy izy ireo. Saingy, E. coli dia karazan-kazo Escherichia, ary P. aeruginosa dia karazana genos Pseudomonas .
3. Inona ny Pseudomonas Aeruginosa
4. Ny fitoviana eo amin'i E. Coli sy Pseudomonas Aeruginosa
5. Fampitahana mifanila - E. Coli vs Pseudomonas Aeruginosa amin'ny endrika Tabular
E. coli dia bakteria anaerobika miiba ratsy, miendrika tsorakazo, fakultative izay an'ny fianakaviana Enterobacteriaceae. Izy io dia bakteria coliform faecal izay matetika hita ao amin'ny tsinay ambany amin'ny zavamiaina misy rà mafana. Betsaka ny karazana E. coli no tsy manimba, ary izy ireo dia ampahany amin'ny microbiota ara-dalàna ny tsinay izay mitazona ny vavony ho salama. Saingy, misy serotypes sasany miteraka fanapoizinana ara-tsakafo, kibo mafy, fivalan-dra, tsy fahombiazan'ny voa ary mandoa. Indrindra ny soritra E. coli O157: H7 dia mamoaka poizina mahery antsoina hoe Shiga, izay tompon'andraikitra amin'ny fanapoizinana ara-tsakafo mahery. E. coli miditra aminay amin'ny alàlan'ny làlan-kabary am-bava. Ny rano, legioma manta, ronono tsy voadio ary hena tsy mbola masaka, dia loharanom-pahalalana marobe E. coli . Noho izany, azo atao ny mampihena ny aretina E. coli amin'ny alàlan'ny fanomanana sakafo sy ny fahadiovana tsara.
E. coli dia iray amin'ireo zavamiaina maodely prokaryotic fototra ampiasaina amin'ny sehatry ny bioteknolojia sy ny microbiology. Noho izany, amin'ny andrana andrana maro momba ny ADN, E. coli no zavamananaina. Ny antony ao ambadiky ny fampiasana E. coli ho toy ny zavamananaina maodely voalohany dia toetra mampiavaka ny E. coli toy ny fitomboana haingana, ny fahazoana haino aman-jery kolontsaina mora vidy hitombo, mora ny manodinkodina, fahalalana be dia be momba ny fototarazo sy ny génomika, sns.
Inona ny Pseudomonas Aeruginosa?
Pseudomonas aeruginosa dia bakteria miendrika tsorakazo-gram misy amin'ny tany, rano ary toerana mando hafa. Mitovy amin'ny E. coli , P. aeruginosa dia bakteria voahidy. Ankoatr'izay, bakteria mihetsika izy io. Manana flagellum tokana izy io. Ankoatr'izay, P. aeruginosa dia ampahany amin'ny flora amin'ny hoditra. Tsy bakteria manimba izy io. Saingy, izy io dia miasa ho toy ny pathogen mpanararaotra. Rehefa malemy i P. aeruginosa dia miteraka homamiadana, fibrosisista kista ary may.
Sary 02: P. aeruginosa fluorescence eo ambanin'ny hazavan'ny UV
Ny iray amin'ireo mampiavaka an'i P. aeruginosa dia ny fluorescence vokariny eo ambanin'ny hazavan'ny UV. Izy io dia vokatry ny famokarana pyoverdin pigmente pigmentale amin'ity bakteria ity.
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'i E. Coli sy i Pseudomonas Aeruginosa?
Samy E. bakteria sy Pseudomonas aeruginosa dia bakteria roa izay ratsy endrika sy miendrika tsorakazo.
Bakteria voahidy izy ireo.
Ankoatr'izay, izy ireo dia otrikaretina iraisana amin'ny olombelona.
Mihetsika ny bakteria roa.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'i E. Coli sy Pseudomonas Aeruginosa?
E.coli dia bakteria coliform izay an'ny karazana Escherichia . Etsy ankilany, P. aeruginosa dia bakteria tsy coliform izay an'ny genus Pseudomonas . Ka io no mampiavaka ny E. coli sy Pseudomonas aeruginosa .
Ankoatr'izay, E. coli dia ampahany amin'ny flora tsinay mahazatra raha P. aeruginosa kosa dia ampahany amin'ny flora amin'ny hoditra mahazatra. Ankoatr'izay, ny fahasamihafana fanampiny eo amin'ny E. coli sy Pseudomonas aeruginosa dia ny E. coli manana flagra peritrichous raha Pseudomonas aeruginosa kosa manana flagellum tokana.
Famintinana - E. Coli vs Pseudomonas Aeruginosa
E.coli sy P. aeruginosa dia karazana bakteria roa izay an'ny karazana Escherichia sy ny karazana Pseudomonas . Samy bakteria motile miiba, miendrika tsorakazo, voajanahary voajanahary. Ankoatr'izay, E. coli dia anaerobika mahay, fa P. aeruginosa kosa dia aerôbika. Ka io no lakilen'ny fahasamihafana misy eo amin'ny E. coli sy Pseudomonas aeruginosa . Ankoatr'izay, E. coli dia manana flagella peritrichous raha i P. aeruginosa kosa manana flagellum polar tokana.
1. “Pseudomonas Aeruginosa.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 9 Jolay 2019, Azo jerena eto .
2. Todar, Kenneth, ary Madison. Pseudomonas, Hita eto .
1. "gram, ratsy, Escherichia, Coli, bakteria" (CC0) via Pixino
2. “Pseudomonas aeruginosa” Nosoratan'ny Sun14916 - Asa manokana (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Slime Layer sy Capsule Fahasamihafana eo amin'ny Hydrophobic sy Hydrophilic Amino Acids Fahasamihafana eo amin'ny famerenana miverina sy tsy azo ovaina Fahasamihafana eo amin'i E. Coli sy Klebsiella
Fahasamihafana eo amin'ny olona sy ny isam-batan'olona
Fahasamihafana eo amin'ny fifehezana sy ny fanararaotana
Fahasamihafana eo amin'ny orthodoksa sy ny katolika
Fahasamihafana eo amin'ny Protagonist sy Antagonist
Fahasamihafana eo amin'ny Punjab Indiana sy Pakistan Punjab